Youtube ayaa cusbooneysiisa oo ku dhawaaqda warka 2021 | Androidsis
Youtube waa la cusbooneysiiyay waxayna ku dhawaaqeysaa warka 2021
Barmaamijka Google ee fiidiyowga weyn, Youtube, wuu sii socdaa iyo sharad ku saabsan had iyo jeer is cusboonaysiinta. Sanadkii la soo dhaafay waxaan aragnay cusbooneysiin weyn ciyaaryahan iyo waliba lagu daray xulashooyinka aan waligood horay loogu arkin Youtube. Hal mar kale, Wararka iman doona dadka isticmaala YouTube sanadka oo dhan 2021 ayaa lagu dhawaaqay, waanan ognahay waxa qaarkood noqon doonaan.
Warku wuu socdaa beegsashada labada qaybood ee Youtube. Taasi waa, waan helnaa hagaajinta isticmaalayaasha ciyaaryahanka daawade ahaan. Laakiin sidoo kale waxaa jiri doona horumarin loogu talagalay abuureyaasha nuxurka iyadoo loo marayo hirgelinta ilaha farsamada. Iyo qaar ka mid ah qalabka cusub ee la haysto ikhtiyaariyada waaweyn ee maamuli kara lacag-bixinta waxyaabaha ku jira.
1 Youtube wuxuu sii wadaa inuu isbeddelo sanadka 2021
1.1 News loogu talagalay isticmaaleyaasha (daawadayaasha):
1.2 Wararka abuureyaasha
2 Youtube ayaa aad uga wanaagsanaan doona sanadka 2021
Youtube wuxuu sii wadaa inuu isbeddelo sanadka 2021
Sannadkii 2020 waxaan arki karnay sida YouTube ay ugu dartay ikhtiyaarka wax lagu qoro fiidiyowyo deg deg ah oo qaab muuqaal ah si gaar ah mobilada. Waxaan sidoo kale arki karnay ku noolaado nuxur leh tayada HDR. Warka la shaaciyayna illaa iyo hadda 2021 ma ahan wax yar. Iyadoo ujeedadu tahay in loo abuuro khibrad wanaagsan dadka isticmaala Youtube, waxaan arki doonaa warar muhiim ah sida kuwa aan kuu sheegeyno oo kale.
News loogu talagalay isticmaaleyaasha (daawadayaasha):
Raadinta fudud. Haddii ay markii horeba fududahay in la maro barta YouTube, iyadoo la cusbooneysiinayo cusbooneysiinta, horumariyayaashu waxay ballan qaadayaan inay ahaan doonaan xitaa ka fudud oo dareen badan. Wax ka beddelka taxanaha ah, a naqshad cusub oo loogu talagalay kiniiniyada. Mid ka mid ah kuwa la ilaaway ee cusbooneysiinti ugu dambeysay ee muuqaalka gaarka ah ee ciyaaryahanka loo sameeyay kumbuyuutaro iyo mid ka duwan kan casriga ah.
Iswaafajin weyn. Sidoo kale ma aanan helin wax caqabado ah oo waaweyn markii ay timid in la soo saaro nooc kasta oo qaab ah YouTube-ka. Markan wuxuu diirada saari doonaa inuu awoodo inuu bixiyo waxyaabo badan oo leh xaqiiqda dalwaddii. Iyo fududeynta ah marin u helida ciyaaryahanka aalado kala duwan leh qadka internetka sida fiidiyoowga.
Youtube music. Mid ka mid ah sharadada adag ee Google ee ku saabsan la wareegida isticmaalayaasha ciyaartoy muusig waa YouTube Music. Maaha wax aan micno lahayn hore ayey u leedahay in kabadan 70 milyan oo raad saraakiisha. Cusbooneysiinta cusub waxay ballanqaadaysaa khibrado aad u la mid ah kuwa aan ka heli karno Spotify sida samee liisaska liiska. Waan sii wadi karnaa liisaska caanka ah ee ay abuureen kuwa kale waxaana jiri doona qaybo ka mid ah siyaabo kala duwan ayaa loo diiwaan geliyey muusigga, sida xaalad maskaxeed.
Youtube Carruurta. Barmaamijka fiidiyowga ee si gaar ah loogu sameeyay kuwa yaryar ayaa dhawaan noqday guul dhab ah. The shaandheeye horeyba u soo koobay dhammaan waxyaabaha sida caadiga ah taasi waa la wadaagayaa waa nabada maskaxda ee waalidiinta. Hadda waa lagu dari doonaa qalab cusub oo loo habeeyo xitaa intaa in ka sii badan oo ah nooca waxyaabaha ay qaan-gaarka u helaan, iyo sidoo kale xaddid waqtiga isticmaalka mareegta. Had iyo jeer soo dhawow hagaajinta ka socota dhammaan guryaha carruurta leh.
gaab. Dhibaatada suurtagalka ah ee fiidiyoowga loogu duubo YouTube-ka awgeed waxay u keeni kartaa isticmaaleyaasha qaarkood, shaqooyin cusub ayaa lagu dari doonaa. A qaab cusub loo yaqaan «Gaaban». Sida magaceeda ka muuqata, waxay ku saabsan tahay fiidiyowyo gaagaaban oo aan toos uga duubi karno mobilka oo aan u soo dejino xilligan. Nooca tijaabada ah ee hadda ka socda Hindiya halkaas oo uu ahaa kacaan dhab ah.
Caawinta ganacsiga. Dukaammada ayaa lagu casriyeeyay xawaare buuxa muddooyinkii ugu dambeeyay. Dijitaalka kuwan ayaa durba xaqiiqo ah in aan goob joog u ahayn wax ka dheereeya sidii aan u maleyn lahayn, iyadoo la tixgelinayo duruufaha aan caadiga ahayn ee soo maray 2020. Iyada oo loo marayo xayeysiinta caadiga ah iyo barnaamijka iskaashiga YouTube abuurayaasha iyo xayeysiiyayaashu way heli doonaan siyaabo badan oo lacag looga dhigi karo waxyaabahaaga.
Iibsiga isku dhafan. Sida aynu nidhaahno, casriyeynta iyo dijitaalinta ganacsiyada ayaa horseeday koboc aad u ballaaran oo ku saabsan iibsashada dhijitaalka ah ee internetka. YouTube kuma cusba kobcitaankan cajiibka ah. Waxaa laga shaqeeyaa hirgalinta waddo ay suurta gal ku tahay u oggolow isticmaalayaasha inay toos wax uga iibsadaan abuurayaasha.
Youtube ayaa aad uga wanaagsanaan doona sanadka 2021
Sida aan aragno, Google uma ogolaanayo in koox ka mid ahi ay ku ekaato halganka. Caddaynta tani waa horumar joogto ah iyo horumarin ka badan Youtube wuxuu ina soo bandhigayaa sanadka 2021. Isbedelada sidee kuu sheegnaa waxay si toos ah u saameyn doontaa labada isticmaale ee YouTube-ka iyo hal-abuurayaasha nuxurka laftooda. Waxaan jecel nahay inaan aragno sida barnaamijyadu u shaqeeyaan si ay u sii ahaadaan kuwo weyn. Sannadkan oo dhan waxaan awoodi doonnaa inaan aragno sida horumarinnada la shaaciyey u yimaadaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Youtube waa la cusbooneysiiyay waxayna ku dhawaaqeysaa warka 2021
Sida loo abuuro dariiqooyinka loo yaqaan 'Auto Auto'
Realme GT 5G ayaa la bilaabi doonaa bisha Maarso 4: waxay ku imaan kartaa iyadoo la adeegsanayo lacag dhan 125 W